कोरोना विरुद्धको खोपलाई लिएर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले विश्वलाई दिए यस्तो खुःशीको खबर - जनबोली न्यूज नेटवर्क प्रा. लि
गृहपृष्ठ » अन्तर्राष्ट्रिय » कोरोना विरुद्धको खोपलाई लिएर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले विश्वलाई दिए यस्तो खुःशीको खबर
३ असोज (रासस÷एएनआई) ः अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अर्काे वर्षको अप्रिल महिनासम्ममा अमेरिकामा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप उपलब्ध हुने बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो– मेरो प्रशासनले यो खोप निर्माणको काम निकै द्रुत गतिमा गरेको छ र मलाई लाग्छ आगामी वर्ष सन् २०२१ को अप्रिलसम्ममा यो खोप तयार हुने छ ।
खोप तयार हुनासाथै सबै अमेरिकी नागरिकलाई लगाइने पनि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जानकारी दिनुभयो । उहाँले खोप हरेक महिनामा दशौँ लाख वटा उत्पादन हुने भएकोले सबै अमेरिकी नागरिकलाई केही महिनामा नै खोप लगाउन सकिने पनि बताउनुभएको थियो ।
शुक्रबार आयोजना गरिएको प्रेस ब्रिफिङका क्रममा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । अमेरिकाका वरिष्ठ बैज्ञानिक र चिकित्सकहरु बिगतदेखि नै यस कार्यमा लागिराखेको पनि बताउनुभयो ।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भन्नुभयो– अमेरिकाका वरिष्ठ चिकित्सक र वैज्ञानिकहरुले यो खोप आविश्कारको काममा लागेका छन् र उनीहरुले यो खोपको परीक्षण पनि अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका छन् ।
त्यसैले पनि अब अमेरिकाले चाँडै नै नयाँ खोप उत्पादनको काम पनि थाल्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँले अब यो खोपको परीक्षण अन्तिम परीक्षणको क्रममा रहेको र सो परीक्षण सकिएलगत्तै खोप उत्पादनको काम गर्ने जानकारी पनि दिनुभयो ।
अमेरिका विश्वमा नै कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको देश हो । यहाँ अहिलेसम्म ६७ लाखभन्दा बढी सङ्क्रमित भेटिएका छन् ।
त्यस्तै अमेरिकामा विश्वमै सबैभन्दा बढीको यस संक्रमणबाट ज्यान गएको छ । शुक्रबारसम्म यहाँका १ लाख ९८ हजार भन्दा बढी नागरिकको यो संक्रमणबाट नै ज्यान गएको छ ।
पूर्व प्रधानमन्त्रीकी छोरी सुतेको होटलमा छापा, एकजना यस्तो हालतमा पक्राउ ! [भिडियोसहित]
अमेरिकामा शक्तिशाली भूकम्पको धक्का : अति तिब्र सुनामीको चेतवानी
भारतले चिनियाँ सैन्य अधिकारी नियन्त्रणमा लिएपछि भारत-चीन फेरी आमनसामने
अचानकको छापामा सत्तापक्षका सांसदले कोरोना फण्डको ६ लाख २० हजार घुस रकम कट्टुमा लुकाए !
जब चुनावमा पार्टीले टिकट नदिएपछि रेणु बिहारमा उर्लिएको जनसागर अगाडी डाको छोडेर रुन थालिन्
आगोसँग खेल्न खोजेको भन्दै चीनले भारतलाई कडा शब्दमा दियो चेतावनी